Hayden Panettiere Ajoinazve Mutambi weInouya Yechitanhatu 'Mhere'
musha	Horror Varaidzo Nhau	Hayden Panettiere Ajoinazve Mutambi weInouya Yechitanhatu 'Mhere'
Tese Taida Kuti Izvi Zviitike
by Trey Hilburn III Dai 12, 2022 311 maonero
Hayden Panettiere ari kujoinha zviri pamutemo mutambi wechitanhatu ari kuuya Danidzira film. Pakave nekuchemera kukuru kune uyu pakuburitswa kwechishanu Danidzira kupinda. Paiva nekazevezeve padandemutande zvaitarisira kuti aizodzoka. Asi, zvinosuruvarisa kuti akanga asiri mumwe wevatambi. Zviri pachena kuti zvakanaka izvozvi, sezvo akaziviswa seanofarira kudzoka kwaanofarira Shevedzera 6.
Panettiere akaridza horror hound huru, Kirby Reed. Akakwanisawo kuve munhu anotyisa pane zvese uye akakwanisa kukanganisa chero uye zvese kuedza kwehupenyu pano kubva kune iyo chaiyo Ghostface.
"Iyo bhaisikopo idzva rinotevera quartet sezvavanosiya Woodsboro kumashure uye kuyedza kutanga chitsauko chitsva, asi ine ruzivo rwakatenderedza chirongwa chefirimu ichi chakavharwa" Kusiyana-siyana Inoshuma.
Vatungamiri vese Matt Bettinelli-Olpin naTyler Gillett vadzoka zvakare kutungamira wechitanhatu. Danidzira. Isu tese tiri kufara nezve vatungamiriri vanodzoka pamwe nekudzoka kwaPanettiere! Ah uye ndiri kutarisira chaizvo kuona zvimwe zveJenna Ortega! Uye kwete chete pamubhedha wechipatara wakaiswa kure seye herring tsvuku.
Tiri kutarisira kuona Danidzira mumitambo yemitambo pazuva rakarongwa rekuburitswa Kurume 31, 2023.